JACAYLKA BEENTA EE BARAHA: ”Way qurux & kaftan badnayd, balse waxay ahayd TUUGO!” (Qiso dhab ah) | Hadalsame Media
Home Madadaalada JACAYLKA BEENTA EE BARAHA: ”Way qurux & kaftan badnayd, balse waxay ahayd...
JACAYLKA BEENTA EE BARAHA: ”Way qurux & kaftan badnayd, balse waxay ahayd TUUGO!” (Qiso dhab ah)
(Hadalsame) 12 Feb 2020 – Thomas iyo Tonia waxa ay ku kulmeen baraha bulshada waxaanay bilaabeen inay farriimo isugu dirdiraan si joogto ah, iyagoo wadaagayey xiisaha ay u qabaan labadooduba safarka iyo eydooda dab joogta ah.
“Markaan imika dib u milicsado, ma rumaysto sida ay ii khaladday ee iigu danaysatay. Xataa wax fikrad ah kama haysan inay doonayso inay i khiyaamayso, si xogtayda gaarka ah debedda ugu saarto si ay lacag iiga hesho”
Deyntii lagu khalday
Wuxuu u tegey bangigiisii u gaarka ahaa, waxaana uu u sharraxay xaaladda, markaa kaddib ayuu bangigii waaxdiisa ka hortagga wax is dabamarintu dib uga bixiyeen lacagtii, waxaanu imika ku mashquulsan yahay inuu dib u saxo hab adeeggii akoonkiisa.
“Hadda waan xidhay dhammaan barahygii bulshada, maxaa yeelay ma doonayo inaan mardanbe xidhiidh la yeesho qof sidanoo kale ah. Waxay igu qaadanaysaa wakhti dheer inaan xaaladdan ka soo kabto, oo aan helo awooddo aan cid kale ku rumaysan karo” ayuu sheegay Toni.
Talo ku aaddan bedqabka baraha bulshada
Previous articleDHEGEYSO: Arrin aad halis ugu ah bulshada oo ka jirta magaalooyinka waawayn ee Somalia
Next article”Annagaa isku filan!” – Dal ka baxay heshiis GUMAYSI oo kale ahaa oo uu kula jirey Maraykanka (Arag tibxaha heshiiska)